An-jatony Ireo Namoy Ny Ainy & Mbola Karohina Noho Ny Fianjeranà Tranobe Tao Savar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2013 15:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, македонски, Swahili, polski, বাংলা
Tamin'ny 24 Aprily 2013 maraina, tranobe misy rihana sivy no nianjera tao Savar, tanàna manodidina ny renivohitr'i Bangladesh, ao Dhaka. Olona maherin'ny 142 no namoy ny ainy, olona an'arivony teo kosa no naratra ary an'arivony ireo mbola karohina ao anaty korontan-trano-rava. Ahitana orinasan-damba manomboka ao amin'ny rihana faha-3 hatrao amin'ny rihana faha-8. Olona teo amin'ny dimy arivo teo no tao anatin'ity tranobe ity tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza.
Bangladesh no mpanamboatra fitafiana vita faharoa amin'ny fahabetsahana aorian'i Shina. Tao anatin'izay andro vitsy lasa izay, nitombo ny ahiahy mikasika ny fiarovana mpiasa, tsy ampy ny rafitra fisorohana sy famonoan'afo, eo koa ny grevin'ny mpiasa noho ny karama kely, sns. Volana vitsy lasa izay, namono olona maherin'ny 110 ny afo nirehitra tao amin'ny tranobe misy rihana sivy an'ny orinasa Tazreen Fashion Ltd ao Ashulia (jereo ny tatitra ao amin'ny Global Voices [mg]).
Ny zava-niseho taorian'ny fianjeran'ilay tranobe misy rihana sivy tao Savar, ambanivohitry Dhaka. Sary avy amin'i Firoz Ahmed. Copyright Demotix (24/4/2013)
Naneho ny hatezerany tao amin'ny media sosialy ireo mpiserasera manoloana ny loza miverimberina eny amin'ny orinasan'ny fanenoman-damba. Vehivavy avokoa ny ankamaroan'ny mpiasa amin'ity sehatra ity. Bilaogera Vashkar Abedin nanoratra tao amin'ny Facebook:
Manjaitra fotsiny ny fahafatesanao…
Joydeep Dey Shaplu tsy nahafey ny hatezerany tao amin'ny Facebook:
Tsy misy olona velona ao anatin'ireto vatana mangatsiaka ireto. Matotoa avokoa isika.. raha tsy izany, tsy navelantsika hitranga ny fahafatesana betsaka tahaka izao..
Nahitana tresaka (triatra) ny rindrin'ilay tranobe ny andro alohan'ny loza. Nakatona avy hatrany ireo orinasa tao [bn]. Saingy tsy noraharahin'ilay tompon'ny tranobe izany fambara fianjerana izany ka mbola nosokafany ihany ny orinasa tamin'ny 24 Aprily 2013 ary noterena hiverina hiasa ireo mpiasa. Tsy manaiky izany fanapahan-kevitra tsy voahevitra avy amin'ny mpitantana izany i Sumeema Yasmin Sumi:
Olona marobe araka izany no noterena nankany amin'ny fahafatesana. Tsy ekeko izao tsy fisian'ny fandraisan'andraikitra avy amin'ny mpitantana izao
Lucky Akter, iray amin'ireo mpikatroka mpitarika ny hetsika #Shahbag nandahatra lahatsoratra tao amin'ny bilaogy Somehwhereinblog izay mitondra ny lohateny hoe “Aza Misaona, Fa Fihetsiketsehana atao”:
Efa ela no nofoanana ny fanandevozana. Saingy hitantsika fa niverina amin'ny endriny hafa izany fanandevozana izany. Efa fantatra fa mety hahafaty, nahoana no mbola noterena hiditra ao amin'ny faritry ny fahafatesana ireo mpiasa? Nahoana no nasaina hiverina hiasa indray izy ireo mba hahazo tombony?
Niara-niasa an-tsitrapo ny mpiasa mpamonjy voina sy ny olo-tsotra mba hamonjy ireo niharam-boina. Sary avy amin'i Firoz Ahmed. Copyright Demotix (24/4/2013)
Avy amin'ny indostrian'ny fanenoman-damba ny ankamaroan'ny vola miditra amin'ny fanondranan'entana ao Bangladesh. Tamanna Sultana nanoratra tao amin'ny Facebook:
Menatra aho! An-jatony hatrany ireo maty, izay taolan-tehezan'ny toekarena ao amin'ny firenena, ary tsy misy olona miraharaha akory. Ary mbola mitohy hatrany izany. Toa izay mahasoa ny mpanankarena sy ny matanjaka ihany no imasoantsika.
Toa tsy mba voampanga amin'ny heloka vitany nahatonga ireo loza goavana ireo tomponà orinasa sy ireo tompon'andraikitra. Apurbo Shohag naneho ny hatezerany tao amin'ny Facebook:
Ao amin'ity firenena ity, tonga mora foana ny fahafatesana. Satria ny ain'olombelona no zavatra mora indrindra. Tsy ny loza niseho androany tao Savar ihany, fa efa nandre imbetsaka isika taorian'ireo loza teo aloha fa hoentina eo anatrehan'ny fitsarana ireo tompon'andraikitra, anisan'izany ireo tomponà orinasa. Kanefa mbola tsy hitantsika misazy ihany izy ireo. Mbola hiseho hatrany izao loza izao. Miavosa hatrany ny isan'ireo vatana mangatsiaka
Maro ireo mbola tototry ny korontan-trano-rava. Sary avy amin'i Firoz Ahmed. Copyright Demotix (24/4/2013)
Wallmart, H&M, Sears, GAP, Tommy Hilfiger sy marika maro hafa malaza no manondrana ny entany (akanjo) vita Bangladesh, izay mitondra mari-tsoratra famantarana “Vita Bangladesh”, reharehan'ny firenena. Arafatul Islam, bilaogera sady mpanao gazety mihevitra fa simba tanteraka izany rehareha izany:
Maty ny afo ateraky ny orinasa ireo mpiasa, maty noho ny fianjeran'ny tranoben'ny orinasa ny mpiasa.. mihalava ny filaharan'ireo maty. Zatra nividy fitafy rehareha “Made in Bangladesh” aho taloha. Ankehitriny, rà no hitako amin'izany mari-pamantarana izany, mahare ny hiakan'ny fahafatesana.
Namoaka didy andro fisaonana [bn] amin'izao loza mahatsiravina izao ny governemanta. Nisy ny antso natao tao amin'ny Facebook ho fanomezan-drà, ka maro ireo nirohotra tao Savar sy teny rehetra teny mba hanome rà.
Filaharana tao amin'ny kianjan'i Shabag ho fanomezan-drà ireo olona naratra nandritra ny fianjeran'ny tranobe tao Savar. Sary: pejy Facebookn'ny Hetsika Shahbag.
Nalefa tao amin'ny Twitter ny vaovao farany:
@ShahbagInfo: Mila RA Rh NEGATIVE ao #Shahbag; kitapon-drà 700 no voahangona, 500 nalefa tao Dhaka Medical College & Enam Medical College. #Savar
Mpilatsaka an-tsitrapo ao Bangladesh nametraka an-tsarintany ireo mpilatsaka an-tsitrapo tao amin'ny Facebook mba hanampy amin'ny hetsika famonjena. Maro ireo sary azo jerena ao amin'ny lahatsoratr'ilay Bilaogera Bishkhoy.